ပန်ဒိုရာ: ပန်ဒိုရာ နာမည်ပြောင်းရမလား
Posted by pandora at 11:19 PM
Pandora's box, noun =aprocess that, if started, will cause many problems that cannot be solved: This court case could openaPandora's box of similar claims. ORIGIN: From the Greek myth in which Pandora was created by the god Zeus and sent to the earth withabox containing many evils. When she opened the box, the evils came out and infected the earth.
ကိုယ်ကြိုက်လို့ပေးထားတဲ့ နာမည်ကိုတော့ ခပ်လွယ် လွယ် မပြောင်းနဲ့ပေါ့..။ ဒီကိစ္စမှာ solution ရှိမှာပါ။ လန်ဒန်က Junior Pandora နဲ့ စကားပြော....အဖြေတခု ကို နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး ရှာကြပေါ့။ result တော့ထွက်မှာပါ။ :D
န တေန အရိယော ဟောတိ၊
ယေန ပါဏာနိ ဟိံသတိ။
အဟိံသာ သဗ္ဗပါဏီနံ၊
ဒါပေမယ့် သတွာတွေကို သတ်ဖြတ်နေတယ်။
အခုမှ ပိစိကွေးလေးပဲရှိသေးတဲ့ မွန်ရဲ့ဘလော့အတွက်
အခိုင်အမာတည်ဆောက်ထားခဲ့တဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုကို ဖျက်မပစ်ပါနဲ့နော်
ဘယ်လိုခံစားချက်ကြောင့် ဒီနာမည်ကိုရွေးခဲ့သလဲဆိုတာ မွန်မှန်းကြည့်လို့ရပါတယ်
မမကသာ မွန့်ကို ညီမလေးတစ်ယောက်အဖြစ် သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်
ပန်ဒိုရာဆိုတဲ့နာမည်ထက် မွန်အများကြီးပိုပြီး တန်ဖိုးထားမိမှာပါ
မပန်ရေ ကိုနေမွန်းသင် ပြောသလိုပါပဲ ... မပန်စိတ်ထဲမှာ ဘာရှိနေမယ်ဆိုတာ တပ်အပ်မသိပေမယ့် ....
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့လို ဘလော့ရေးသူ အသစ်တွေအတွက် မြန်မာဘလော့ရပ်ဝန်းလေးဟာ ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရင်းရင်းနှီးနှီးရှိပါလားဆိုတာ အားလုံးကိုသိစေချင်ပါတယ်။
နာမည်ဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း မပန်ကတော့ မပန်ပါပဲလေ။ ကိုစိုးထက်ပြောသလို စွယ်စုံရ ဆရာမ မပန်ပေါ့ ...။ ကျွန်တော် စာထဲမှာ မှားတာပါရင်လဲ ခွင့်လွှတ်ပါ။
အရီးပန်ကလည်း..ပြောင်းပါနဲ့ ...။ လေးမ က အရီးပန် လို့ ပဲခေါ်ချင်တာ...။
ကိုငြိမ်းချမ်းအောင် . ကိုမေတ္တာ . မျှားပြာ . လေးမ အကြံပေးတာ မှတ်ချက်ချတာတွေအတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
ညီမလေး မွန် နာမည်မပြောင်းလည်း ညီမလေးလို သဘောထားပြီးသားပါကွယ်။ အစစ အရာရာ အဆင်ပြေပါစေ။
ပြောင်းချင်ရင် ပန်ဒိုရာအတုစစ်စစ်ဆိုပြီး ပြောင်းဗျာ ... ဒါမှ မဟုတ်လည်း ပန်ဒိုရားအိုးဆိုပြီ ပြောင်း။
ဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း နာမည်ပြောင်းရင်တော့ ကင်ပွန်းတပ်ပွဲလုပ်ရမယ်နော်
“မူလလက်ဟောင်း ပန်ဒိုရာ” လို့ အကြံပေးမလို့ ၊အပေါ်မှာ လှလှပပ စည်းစည်းလုံးလုံး သဘောထားကြီးစွာ၊ အဆင်ပြေသွားကြပြီဆိုတော့ မလိုတော့ဘူးပေါ့
မပန်ရေ.. နာမည်ကိစ္စ အဆင်ပြေသွားပြီမို့လို့ ၀မ်းသာစရာပါ... ညက ဘယ်လို အကြံပေးရမှန်းမသိလို့ comment မရေးခဲ့တာ.. မနက်အိပ်ယာ နိုးနိုးချင်း မပန်အကြောင်းသတိရပြီး ဒီကိုလာကြည့်တော့ အားလုံး အဆင်ပြေနေပြီ.. :)
မင်္ဂလာ နံနက်ခင်းပါ . . .
နာမည်ကိစ္စ အဆင်ပြေသွားကြတာ ၀မ်းသာပါတယ် . . .
အခုတော့ အားလုံး အဆင်ပြေ သွားကြပြီဘဲ
ကောင်း မှ ကောင်း . . . .
call her junior pandora
နာမည်တော့ မပြောင်းပါနဲ့။ ငယ်ငယ်တုန်းက ကျောင်းမှာဆိုရင် နာမည်တူ ၂ယောက် အတန်းထဲမှာရှိ ရင် နံပါတ်ကို နောက်မှာထည့်ခေါ်လေ့ရှိတယ်လေ။ ဥပမာ မောင်မောင် ၁၊ မောင်မောင် ၂။
နောက်တနည်းကတော့ နာမည်ပြောင်နဲ့ခေါ်တာ။ ဥပမာ ကွမ်းနှစ်ယာ ပန်ဒိုရာ၊ ပိစိ ပန်ဒိုရာ။
အခုတော့ ပိစိ ပန်ဒိုရာ က နာမည်ပြောင်းပေးပါမယ် လို့ဆိုတော့ ပြဿနာမရှိတော့ဘူးနေပေါ့။
အမတို့နံမည်၂ခုတူတဲ့အကြောင်းဖတ်မိတော့... ၁ခါက ကိုဝေလင်း(ကိုနှင်းခါးမိုး)ရေးတဲ့ ရွေကျင်ဘုန်းကြီးကျောင်း ၂ ကျောင်း အကြောင်းတောင်သတိရမိတယ် ...
အစ်မရေ.. ခုမှပဲ အစ်မ ခံစားချက်ကို အပြည့်အ၀နားလည်တော့တယ်...